Xarakada Alshabaab ee Baladweyne oo Xabsiga dhigay dad rayid ah oo tiro badan – SBC
Xarakada Alshabaab ee Baladweyne oo Xabsiga dhigay dad rayid ah oo tiro badan
Sida ay ku waramayaan wararka ka imanaya magaaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan xarakada Alshabaab ayaa xabsiga dhigay tiro dad rayid ah oo lagu soo qabqabtay howlgalo ay ciidamada Xarakada Alshabaab ka sameeyeen gudaha magaaladaas .
Dadka rayidka ah ee xabsiga loo taxaabay ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay 70 qof kuwaas oo ku xir xiran xabsiyada ay xarakada Alshabaab ku leeyihiin magaaladaasi.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan gudaha Baladweyne ayaa xafiiska SBC ee gobolkaasi u xaqiijiyay in dadkani laga soo qabqabtay afarta xaafadood ee magaalada baladweyne ku yaala .
Ciidamada Alshabaab ayaa howlgalada ay dadkani ku soo qabqabteen waxa ay la xiriireen habeen ka hor markii dagaal mudo saacado ah ay kula wareegeen magaalada Baladweyne ciidamada Maamulka Dooxada Shabeele, kuwaas ayaa intii halkaasi ay ku sugnaayeen waxa ay xabsiyada ka sii daayeen dad xarakada Alshabaab ugu xir xirnaa xabsiyada Baladweyne ay ku leeyihiin .
Sidoo kale dadka ay xirxireen xarakada Alshabaab ayaa waxay la xiriirinayaan in ay lug ku leeyihiin maamulka dooxada shabeele .
Odayaal iyo wax garad ka mid ah Gobolka ayaa wararka waxa ay sheegayaan in dadaalo iyo xusul duub ugu jiraan sidii xarakada Alshabaab looga soo deyn lahaa dadka rayidka ah ee todobaadanka kor u dhaafaya ee ay xabsiyada u taxaabeen.
Si kastaba ha ahaatee xaalada Gobolka Hiiraan ayaa 2dii maalin ee ugu dambeysay laga dareemayaa xaalad iyo xiisad kacsan taas oo ka dhalatay weerar ay habeen ka hor halkaasi ku soo qaadeen ciidamada Maamulka Dooxada Shabeele kaasoona mudo saacado ah la wareegay gacan ku heynta xarunta gobolkaas ee Baladweyne.